‌ဗာရန်းကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းဟောင်းအတွက် ဝမ်းသာနေတဲ့ ရော်နယ်ဒို – Sports Soccer News
‌ဗာရန်းကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းဟောင်းအတွက် ဝမ်းသာနေတဲ့ ရော်နယ်ဒို
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူသစ် ဗာရန်းကို ယမန်နေ့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မတိုင်မီ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားပါတယ်။ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင် နောက်ခံလူဟာ ယူနိုက်တက် အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားနဲ့အတူ ဗဟိုခံစစ်ကို ဦးဆောင်သွားမာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗာရန်းနဲ့ ယူနိုက်တက် အပြောင်းအရွေ့ကို ယူနိုက်တက်နဲ့ ရီးရဲလ် ကစားသမားဟောင်းတွေက ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လူမှုကွန်ရက်နဲ့ ရုပ်သံမီဒီယာတွေမှာ ဖွင့်ဟခဲ့ကြပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်းလဲဖြစ် ဗာရန်းနဲ့အတူ မက်ဒရစ်မှာ ၇ နှစ်ကြာတွဲကစားဖူးတဲ့ ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် ဂန္ထဝင်နောက်ခံ လူဖာဒီနန်က ဗာရန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ သူ့ Instagram မှာ “မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေ ကြိုဆိုပါတယ်..ဗာရန်းရေ။ ဂုဏ်ယူပါတယ် . .win win win!”ဆိုပြီးတော့ Post တင်ခဲ့ချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ဖာဒီနန်ကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ “Great!”လို့ Comment ဝင်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၈ အထိ ရီးရဲလ်မှာ ဗာရန်းနဲ့ အတူတွဲကာ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုက ဗာရန်းဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ခေါ်ယူမှုလို့သုံးသပ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ခန့်ကတည်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နောက်ခံလူတယောက် ဗာရန်းဟာ ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောဆိုဖူးခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဟာ ၂၀၁၃ကတည်းက အသင်းဖော်ဟောင်း ဗာရန်း ရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” ဗာရန်းက လက်ရှိမှာ စီနီယာတွေဆီက လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။ သူဟာ ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ရော လူသားတယောက်အနေနဲ့ပါ ရင့်ကျတ်သူပါ။ သူက လျင်မြန်သလို အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုလည်း အပြည့်ရှိတယ်။
အသက်ငယ်ငယ်ကတည်းက အတွေ့အကြုံတွေ ရှာဖွေနေပြီး စီနီယာနဲ့ ဆရာတွေ‌အပေါ် နှိမ့်ချမှုလည်း ရှိပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဗဟိုနောက်ခံလူတယောက် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ” လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က အေအက်စ်အားကစားသတင်းစာကို ရော်နယ်ဒို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံလူသစ္ ဗာရန္းကို ယမန္ေန႕မွာ ကစားခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္နဲ႕ လိဒ္ယူနိုက္တက္တို႔ရဲ႕ ပြဲစဥ္မတိုင္မီ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားပါတယ္။ ျပင္သစ္လက္ေ႐ြးစင္ ေနာက္ခံလူဟာ ယူနိုက္တက္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ မက္ဂြိုင္းယားနဲ႕အတူ ဗဟိုခံစစ္ကို ဦးေဆာင္သြားမာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗာရန္းနဲ႕ ယူနိုက္တက္ အေျပာင္းအေ႐ြ႕ကို ယူနိုက္တက္နဲ႕ ရီးရဲလ္ ကစားသမားေဟာင္းေတြက ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို လူမႈကြန္ရက္နဲ႕ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြမွာ ဖြင့္ဟခဲ့ၾကပါတယ္။ ယူနိုက္တက္ကစားသမားေဟာင္းလဲျဖစ္ ဗာရန္းနဲ႕အတူ မက္ဒရစ္မွာ ၇ ႏွစ္ၾကာတြဲကစားဖူးတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္တိုက္စစ္မႉး ေရာ္နယ္ဒိုလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။
ယူနိုက္တက္ ဂႏၳဝင္ေနာက္ခံ လူဖာဒီနန္က ဗာရန္းရဲ႕ဓာတ္ပုံနဲ႕အတူ သူ႕ Instagram မွာ “မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္းကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္..ဗာရန္းေရ။ ဂုဏ္ယူပါတယ္ . .win win win!”ဆိုၿပီးေတာ့ Post တင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုက ဖာဒီနန္ကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႕ “Great!”လို႔ Comment ဝင္ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၁ ကေန ၂၀၁၈ အထိ ရီးရဲလ္မွာ ဗာရန္းနဲ႕ အတူတြဲကာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုက ဗာရန္းဟာ ယူနိုက္တက္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ေခၚယူမႈလို႔သုံးသပ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္ခန႔္ကတည္းက ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ေနာက္ခံလူတေယာက္ ဗာရန္းဟာ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာဆိုဖူးခဲ့ပါတယ္။
ေရာ္နယ္ဒိုဟာ ၂၀၁၃ကတည္းက အသင္းေဖာ္ေဟာင္း ဗာရန္း ရဲ႕ ေျခစြမ္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ” ဗာရန္းက လက္ရွိမွာ စီနီယာေတြဆီက ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္။ သူဟာ ကစားသမားတေယာက္အေနနဲ႕ေရာ လူသားတေယာက္အေနနဲ႕ပါ ရင့္က်တ္သူပါ။ သူက လ်င္ျမန္သလို ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈလည္း အျပည့္ရွိတယ္။
အသက္ငယ္ငယ္ကတည္းက အေတြ႕အႀကဳံေတြ ရွာေဖြေနၿပီး စီနီယာနဲ႕ ဆရာေတြ‌အေပၚ ႏွိမ့္ခ်မႈလည္း ရွိပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း သူဟာ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ဗဟိုေနာက္ခံလူတေယာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ” လို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေအအက္စ္အားကစားသတင္းစာကို ေရာ္နယ္ဒို ေျပာျပခဲ့ဖူးပါတယ္။
ကစားသမား အလဲအထပ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ အာဆင်နယ်
တက်လမ်းတွေ ရှိပေမယ့် ဟယ်ရီကိန်းထက် အသင်းကို ပိုချစ်ပြခဲ့တဲ့ ဆွန်ဟောင်မင်